June 25, 2020 - Khitalin Media
သရုပ်ဆောင်ချစ်သူ့ဝေနှင့်၎င်း၏ ဖခင် ဦးဇော်ဝင်းကို အမျိုးသားရေးအဖွဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးအေးပိုင်မှ တရားစွဲဆိုလိုက်ပြီ..
June 25, 2020 Khitalin Media 0
သရုပ်ဆောင်ချစ်သူ့ဝေနှင့်၎င်း၏ ဖခင် ဦးဇော်ဝင်းကို အမျိုးသားရေးအဖွဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးအေးပိုင်မှ တရားစွဲဆိုလိုက်ပြီ ရန်ကုန်၊ဇွန်-၂၅ PeopleMedia ပန်ချီကားရေးဆွဲရာ၌ ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းအရာများကြောင့် သရုပ်ဆောင်ချစ်သူ့ဝေနှင့်၎င်း၏ ဖခင် ဦးဇော်ဝင်းကို အ မျိုးသားရေးအဖွဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးအေးပိုင်မှ တရားစွဲဆိုထားကြောင်း သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများက PeopleMedia ကို အတည်ပြု့ပြောဆိုပါတယ် […]
တစ်စုံတစ်ဦးက သင့် အေကြာင်း တွေးနေပြီဆိုရင် ကြုံရမယ့် ထူးခြားတဲ့ နိမိတ်များ
တစ်စုံ တစ်ယောက် က သင့် အကြောင်း တွေးနေ တာကို သိနိုင်မယ် ထင်လား? သိရော သိချင်လား? ခုပြောပြမယ့် အချက်တွေက သင့်အကြောင်းကို တစ်ယောက်ယောက်ကေ တွးနေတဲ့အခါ သင့်မှာ ခံစားနေရမယ့် လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။သင့်အကြောင်း တွေးတယ် ဆိုတာမှာ သင့်ကို ချစ်လို့ဖြစ်စေ မုန်းလို့ဖြစ်စေ […]
ဆီးချိုရောဂါအတွက် ရွေးချယ်စားသုံးပေးသင့်တဲ့ ကန်ဇွန်းဥ ကန်ဇွန်းဥကို မီးဖုတ် (သို့) မီးကင်ပြီးစားစား၊ ပြုတ်ပြီးစားစား အရသာရှိလှပါတယ်။ အရောင်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ ကန်ဇွန်းဥကိုလည်း ဈေးကွက်မှာ ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ကန်ဇွန်းဥကို စားသုံးရင် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ ၁။ ဆီးချို ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေအတွက် ကန်ဇွန်းဥကို ရွေးချယ်စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ကန်ဇွန်းဥမှာ သဘာဝသကြားဓါတ်ပါဝင်ပြီး ဆီးချိုဖြစ်စေဖို့ […]
ပူတာအိုဆေးရုံက မှေးခနျးအကွောငျး လူနာရှငျ ဆရာမ တဈယောကျရဲ့ မကွောကျတမျး ရငျဖှငျ့ခကျြ..
ပူတာအိုဆေးရုံအား ပထမဆုံး စိတ်ပျက်မိခြင်း – မွေးခန်း ရေမလာပါ, ပထမဆုံးပုံက မွေးတဲ့ကိရိယာ instruments တွေ, မွေးပေးတဲ့ ဆရာဝန်တွေ ဆရာမတွေ လက်ဆေးရတဲ့ ရေကန်ပါ။ ရေသိုလှောင်ထားတဲ့ ကန်ထဲက ရွံ့ရေတွေပါ။ အဲ့တာကို တွေ့တွေ့ချင်း ကျမ ဆေးရုံအုပ်ကို ဖုံးဆက်ပြီး complaint တက်ပါတယ်။ကျမ […]
သင်​တို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ နံပတ် 1 ,2,3,4,5,6,0ရဲ့ ကံကောင်းခြင်း အဖြေများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ကိုယ့်​ကံကြမ္မာကိုယ်​တိုင်ဆန်းစစ်နည်း မနိုင်သည့်ဝန်ထမ်းသလိုလုပ်ကိုင်မှုတို့ကြောင့် စိတ်ပင်ပန်း၊လူပင်ပန်းကြုံရမည် မိမိ၏ယုံကြည်ချက်ကိုစွဲမြဲစွာ လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ရယူနိုင်မည်။ […]
သငျ့ကို အမွဲလှနစေမေညျ့ လြှို့ဝှကျခကျြ ၁၀၀
မိန်းခလေးမှန်ရင်သိမ်းထားပါ 1.မိတ်ကပ်လိမ်းခြယ်မယ်ဆို အောက်ခံ အသားအရည်ကို အရင်ကောင်းအောင်လုပ်ပါ 2.မိတ်ကပ်ကို အိမ်မှာနေရင် မလိမ်းပါနဲ့ 3.မိတ်ကပ်ကို အပြင်သွားပြီး ပြန်လာတာနဲ့ တစ်ခါထဲ ဖျက်ပါ 4.မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့နေ့တွေမှာ မျက်နှာကို သေချာသန့်စင်ပါ မိတ်ကပ် က မျက်နှာသစ် ဆပ်ပြာ တစ်ခုသုံးယုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး 5.မိတ်ကပ်ဖျက်မယ်ဆို မိတ်ကပ် remover […]